အနော်တို့ရွာထဲမှာဗျာ…. (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အနော်တို့ရွာထဲမှာဗျာ…. (၂)
Posted by Wow on Dec 16, 2013 in Aha! Jokes, Satire | 27 comments
အရင်က တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အနော်တို့ရွာထဲက ဆယ်ဗျစ်တီများ အကြောင်းဆက်ရရင်… ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်အရင် ထောင်းပါမယ်… မွ… မွ…
ကန္နားစီးဂီ ခေါ် မိဂီ ခေါ် … ခေါ်ချင်ရာခေါ်ကို ခုလတ်တလော သူ့လိုဂိုအရ ဒေါင်းကားယားဂီလို့ နာမယ်ဖျက်ထား အဲလေ ချစ်စနိုးနာမယ်ပေးထားပေမဲ့… အရာရာ အိုးနင်းခွက်နင်း ကို့ယို့ကားယား လုပ်သမျှ အစတထောင်းထောင်းထားခဲ့တတ်တာ အနော်ပါ…
မန်းဂေဇက်မှာတင် ဟုတ်မိဟုတ်ရက် နောက်ဆက်တွဲ… မျှော်ပါ.. ဘယ်ပုံရေးပါမည် ဆိုပြီးတန်းလန်းထားခဲ့တဲ့ စာတွေက အနော်ရေးတာရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ရှိပါတယ်။
မွေးသန္ဒေ သေခါမှဖျောက် ဆိုသလို… ငယ်ငယ်ထဲက ဖွားအေက ညီးအေ.. အ၀တ်တွေက ဟိုတထည် ဒီတထည် ထမီတွေက ကွင်းလိုက် ဟိုနေရာ ကော်ဖီပန်းကန် ဒီနေရာ မုန့်စားခွက် တန်းလန်း … နေရာတကာ ခွေးလှေးပျား တောအနှံဆိုသလိုပါအေ… (ခွေးလှေးပျားရဲ့ ဒက်ဖနေးရှင်း အနော် မေးမကျိမိလို့ မသိ)
ဟင်းကူ ချက်ပါဆိုတော့လဲ ကြက်သွန်ဖြူ နှစ်တက်လောက်ခွာပြီး စိတ်မရှည်လို့ အခွံပါ ထဲ့ထောင်းသွားတယ်… ဟင်းဆီသတ်မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး ဘယ်ပျောက်သွားလဲမသိဘူး… ဟင်းအိုးကျက်ခါနီးမှ ရောက်လာပီး အချိုမှုန့်တွေ ဆားတွေ ပစ်ထဲ့သွားတယ်.. ဒီဟင်းမှ မကောင်းရင် ဘယ်ဟင်းမှ မကောင်းတော့ဝူး… ဟီးးးးးးးးးး
ဒီစာကို လူပျိုကြီး၊ လူပျိုလတ်၊ လူပျိုလေးများ မမြင်ဇီရ…
ဘာသာစကားသင်တန်းကြပြန်တော့လဲ… ဂျပန် တစ်လလောက်တက်ပီး တန်းလန်း… တရုတ် တစ်ပတ်… အင်္ဂလိပ်စာတစ်ခုသာ ဆရာကောင်းနဲ့လဲတွေ့ခဲ့တော့… လုပ်စားလို့ရယုံ အနည်းငယ်…
ပထမဆုံး အလုပ်စ၀င်ဝင်ခြင်း ဘ၀အဆက်ဆက်ကျောင်းဆရာဖြစ်ခဲ့သလားမသိတဲ့ ချင်ကျားပူဘောစိက အနော့်ကို စာသင် ထရိန်နင်ပေးပါတော့တယ်… သူ့ကိုပြောချင်တာမှန်သမျှ ကြားလူမထားရ လက်ဟန်ခြေဟန် မပြရ.. ကိုယ်တိုင်ပြော သူမရှိတဲ့အချိန် လာသမျှမတ်စိ အင်္ဂလိပ်လိုချရေး… ပြီးရင် မင်နီတွေ တသီတတန်းနဲ့ ပြင်ပါ တော့တယ်… ဒီလိုနဲ့ သေစာရှင်စာလေးတော့ တတ်လာခဲ့တယ် ဆိုပါစို့…
နောက် ဆယ်ဗျစ်တီတွေအကြောင်းတော့ ထင်းခွေမကြုံ ရေခတ်ကြုံ ကြိုးစားပီးရေးပါ့မယ်… :hee:
မိမိပေါင်ကို မမွတမွ ထောင်းခြင်း…….
ဒီ ရွာ့ ဆယ်လီဗျစ်တီ အစ ကိုတော့ အဆုံးထိ ဆက်ဆွဲပါနော့
လူပျိုကြီး၊လူပျိုလတ်၊ လူပျိုလေးထဲမှာ မပါတဲ့
သကြားလဲ နာ့အရည်အချင်းတွေ ကျိတ်သဘောကျပီး နတ်သမီးငါးရာထားခဲ့ပီး ဒီဘက်ကို ဒိုင်ဗင်ပစ်မလာနဲ့နော်
တော်လိုက်တဲ့ ဝေါင်း…ဂုဏ်ပုဒ်ကတော့ အပြည့်…
ကြုံလို့ပွါးရရင် ခွေးလှေးပျား ဆိုတာ ဟိုတစု သည်တစု တပ်စွဲတာကွယ့်…
ကျောက်စ်တို့ ကွင်းဆင်းတုန်းက တောထိုင်ဖို့ သန်းပေးဖို့ဆို…
သင်းတို့ကို တအားကြောက်တာ၊ မတော်ရာ တုပ်လိုက်ရင်မလွယ်… ဟီ ဟိ
အဖွားအမြဲပြောပြောနေတဲ့ ခွေးလှေးပျား ဘာမှန်းမသိ… ခု ကျောက်စ်ပြောမှပဲ… အနော့်လို့ ဟိုတစ်ခု ဒီတစ်ခု နေရာအနှံ့ပေါ့နော်
သူ့ပထွေးတော့ ခွေးသို့ မဟောင်၊
ပလူးရ ပြေးကျို့ကာ ခွေးသို့ပမာ
အမျိုးပါ ဆဲချင်တော့လေး။ ။
ရက်စက်ပါ့ ဒဂျီးရယ်… အနော်က အိမ်မှာဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ အမှိုက်ဖွရုံတင်ပါ.. ဒါဂို အချုပ်တန်းဆရာဖေပါခေါ်ချလာတယ်… ဗြဲဟဲ…ဟဲ :byee:
ယင်းဂလိပ်လို သေစာရှင်စာလေးတော့ တတ်လာခဲ့တယ် ဆိုပါစို့…
မိုက်မိုက် အာ့လေးမှ မတတ်ရင်လဲ ခုထိ အိမ်မှာ ခွေးလှေးပျားလုပ်နေရအူးမှာ
ပုဂျွန်ကန်က အစ်မကြီး ဒါတော့အပြီးရေးမယ်မို့လား ..အာဟိ
ပြရင်ပြသလောက်ပဲကျိ.. ပိုမကျိချင်နဲ့… စာကိုပေါဒါ…
နို့မို့ ကချင်နုထွားကြီးကို ချစ်တီးမကြီး ဖြူဖွေးနဲ့ သွားတိုင်ပစ်မာ…
နာ့ ထက်ကို ရမ်းရမ်းတော်နေပါ့လားးးး
နိနဲ့နာ နှစ်ယောက်ပေါင်းရင် ငယ်က ဖွားတို့ပြောသလို ထမင်းအိုးအမြှောက်နဲ့ ပစ်ချနေရပါမယ်အေ….
လောလောဆယ်ဒီအရည်အချင်းတွေကို ချောကလက်နဲ့တူတဲ့ဗလတောင့်တောင့်နဲ့တဂျားလေးကော၊ကချင်နုထွားကြီးပါမြင်းတွားပီ ဆိုတော့ကာ
အရည်အချင်းတွေကျိပီး ဒိုင်ဗင်ကို ပစ်လာကြတာ… ရွေးဖို့တောင်ခက်နေဘီ သော်ကလေးရဲ့
(၂)ကိုမဖတ်ခင် (၁)ကိုအရင်ဖတ်ကြည့်မှဆိုပြီး ရှေ့စာမျက်နှာမှာ အခေါက်ခေါက်ရှာတာမတွေ့၊
ဒါနဲ့ (၂)ကနေလိုက်ရှာမှလို့ ၀င်ကြည့်တော့မှပဲ ဒေါ်ဝေါင်းရဲ့ ရှင်းတမ်းတွေ့။
(၃)ကိုတွေ့ရင် (၂)ကိုပြန်မရှာရအောင် ခုထဲကမှတ်ထားမှ။
ဟီးး အန်ကယ်ဒုံ အတော်အလုပ်ရှုပ်သွားတာ… ဆောတီးပါ… ဒမာ အရင်ကလင်… အဲလေ လင့်က
၃ ကိုစောင့်ဖတ်နေမယ် ဗျာ
ဆက်ဆက်စောင့် မလာမချင်းစောင့်နော်… မောင်…
အခြားဟာဒွေက ကိစ္စအရှိဗူး.. အဝှာလုပ်ရင်တော့ ပြီးဗလေ့စေ..
စိတ်ချ … ကြောင်ဆိုရင်တော့ မသေမရှင်မထားဝူး တစ်ခါထဲ ကိတ်စတုံးချင်တုံး ဒါမှမဟုတ် မျိုးတုံး…
တော် တော် တော် တော် လိုက် တာ နော်
ဒါတောင် အရည်အချင်းတွေ အကုန်မဟုတ်သေးဘူး…
၁ က်ုလည်း ရှာဖတ်​ပြီး
၃ ကိုလည်း ​စောင့်​​မျှော်​လျှက်​
​အော်​ …… အ​ရေးအသားအဖြတ်​အ​တောက်​​လေးများနည်းယူပါ၏ ။
ဆြာဆာ… နောက်ရ၀ူးနော်… တောင်ရေးမြောက်ရေးကိုများ စောင့်ကျိလောက်စရာမရှိပါဝူး ဆာဆာရယ်…
တညင်းဝက်ရော… တညင်းသီး ၀က်သားနဲ့ချက်တာပါ မမဂျီးက ကြိုက်ပီးသား… လူသာ မပါစေနဲ့